गाई जुन रंगको भएपनि गोरस त सेतै हुन्छ | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home बिचार गाई जुन रंगको भएपनि गोरस त सेतै हुन्छ
आकासको रंगको विषयलाई लिएर जंगलमा चितुवा र गधाको विवाद परेछ । चितुवा भन्दो रहेछ– आकास निलो छ । गधाको दलील रहेछ– हैन आकास त सेतो छ नि । विवाद चुलिएपछि उनीहरु निक्र्योल गर्न जंगलको राजा सिंह कहाँ जाने निधो गरेछन् । सिंहले दुवै पक्षको तर्क सुनेपछि चितुवालाई कोर्रासहित जेल हाल्ने पैmसला सुनाएछ । पैmसलाप्रति आपत्ति जनाउँदै सत्य कुरा गर्दा दण्डित हुनु न्यायोचित नभएको गुनासो चितुवाले गर्दा सिंहले भनेछ– ‘गधा भन्ने जान्दाजान्दै उसंग तर्क वितर्कमा उत्रिनु तिम्रो कमजोरी हो । बाजी जिते हारेको भन्दा पनि गधासंग बौद्धिकताको प्रतिस्पर्धा गरेको कसुरमा तिमीलाई मैले यो दण्ड सजाय सुनाएको हुँ ।’
फेसबुके नेता, फेसबुके प्रशासक, फेसबुके जनताको भाइरसले देशका तमाम अंगहरु निष्कृय छन् । असल र भलो चिताउनेको हाल अहिले त्यही निर्दोष चितुवाको जस्तो छ । नूनको सोझो चिताउनभन्दा फेसबुकको लाइकमा रमाउने उन्मादले सवैलाई उत्ताउलो बनाउँदै लगेको छ । भोलि पाउने मजूरभन्दा आज पाउने परेवाको प्राप्तिमा सब दंगदास छन् । सामाजिक सञ्जालमा देखिएका, लेखिएका वाक्य हेर्दा यो देशमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको वौद्धिकता, बीपी कोइराला, मदन भण्डारी, मनमोहन, गणेशमानसिंहका राजनीतिक निष्ठा रंगहीन प्रमाणित हुन्छन् । मानौं अष्टबक्रजस्तै जन्मिनुअघि नै सबलाई सवै कुराको ज्ञान छ । राष्ट्रियताको चकमके झिल्को यसरी प्रकट हुन्छ कि त्यो बेगले मार्क जुकरबर्गको कमाइ खाने फेसबुके भाँडोलाई नै केही समयमा जलाएर खाग बनाइदिनेछ । विवेकको बट्टामा विर्को लगाएर दास मानसिकताहरु असरल्ल छरिएका छन् । शिकार गर्ने ताकत सकिएपछि झिंगेदाउमा लागेको बाघ भैंm अर्ती र बुद्धिका भकारी भएर बाँचेका नेता र प्रशासकका कुण्ठाले पनि फेसबुकमा राम्रै जागिर पाएको छ । आफ्नो समयमा परिवर्तनका नाममा वास्तुशास्त्रीले दिएको एक मात्र सल्लाह हुबहु मानेर कुर्सी र टेबलको दिशा फेरेको बाहेक अरु काम नगरेका यस्ता भूतपूर्वहरुले नमागिएको सल्लाह दिएर अभूतपूर्व हुने जाँगर देखाउनु घोडाअघि बग्गीको प्रवेशजस्तै हो । वास्तवमा सामाजिक सञ्जालका राम्रा नराम्रा आआफ्नै विश्लेषण होलान तर यसले यो देशमा जनता नाममा एमाले, कांग्रेस, माओवादी मात्र रहेको प्रमाणित गर्छ । यहाँ मानिस मर्दैनन्, पार्टीका कार्यकर्ता मर्छन् । शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएर बसेका सीडीओहरु समाज गठन गरेर राजनीति गर्छन् । उनीहरुलाई आफ्नो हैन, प्रचण्ड, ओली, देउवा हेडक्वार्टरको चिन्ता हुन्छ । न्यायाधीशहरु संघ बनाएर पानी आपैंm प्यासले तड्पिएको छनक दिन्छन् । न्यायालयमा पन्पिएको राजनीतिक बीउ अब अलि वर्षपछि यसरी झाँगिने छ कि त्यतिबेला कांग्रेस, एमाले र माओवादीको छुट्टाछुट्टै बेन्च हुनेछ । एउटाले गरेको पैmसला अर्कोलाई चित्त बुझ्ने छैन् । त्यसपछि पूर्ण इजलासको माग हुनेछ । त्यसमा पनि सत्ता सन्तुलनको आधारमा न्यायाधीशको राय बाझिनेछ । त्यसबेला स्वतन्त्र न्यायालयको विरुप दृश्य कस्तो देखिएला, संझदा पनि काँडा उम्रन्छ । अब राष्ट्रियताको जग मजबुत पार्ने जिम्मेवारी कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र प्रेस जगतले नभएर सिमेन्ट र डन्डीले लिने गरेका छन् । देशका कार्यकारी निकाय गुठी बन्दै जाने अनि डन्डी र सिमेन्टका विज्ञापन देशको मेरुदण्ड र नेपालीलाई जोड्ने सेतूका रुपमा यत्र, तत्र, सर्वत्र प्रकट हुन थालेपछि हात्ती र हात्तीछाप चप्पलबीचको अन्तर खुटिन छाडेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिव, चार सचिव, आधा दर्जन सहसचिव सहित पाँचसय कर्मचारी कार्यरत छन् । तिनीहरुको एउटै ध्येय भनेको प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउनु हो । तर प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा पार्टीको एउटा स्वार्थी गुठी लिएर मुलुक हाँकेको भ्रममा मस्त हुन्छन् । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सयौं जनशक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको गुठीले साधक हैन बाधक ठान्छ । प्रधाानमन्त्रीक
ो दाहिने हात मानिने मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीको भेट संयोग बन्छ । अधिकांश प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री निवासलाई मिनी पार्टी कार्यालय बनाए तर नेपालीको हित सोच्ने धाम बनाउन सकेनन् । नेपालको सन्दर्भमा मुलुकको कार्यकारी पद जिम्मेवारी नभएर चटकेको आसन बन्दै गयो । मूढ बुद्धि भएकाहरु पनि त्यहाँ पुगेपछि परमार्थी पुरुष बन्ने अभिनयमा मस्तराम भए । सिक्नु नपर्ने, सल्लाह लिनुनपर्ने तर आपूmले बोलेका हरेक वाक्य ब्रम्हवाक्य भन्ने भ्रम पाल्नुपर्ने अनौठो मनोविज्ञानबाट उनीहरु हौसिंदै गए । प्रधानमन्त्रीलाई अनुकूल हुने एजेण्डा लिएर जाने हुक्के, बैठकेहरुको भीडले ठूला मानिसहरु छोपिँदै गए । राम्रो लाउने र मिठो खानेमा सीमित ती एजेण्डाले व्यक्तिको अनुहार त फेरियो तर देश गर्तमा जाकिने प्रस्थान विन्दु कोरियो । जमिनविनाको त्यो अभिनय पदबा खुस्केका भोलिबाट सियोले घोचिएपछिको बेलुनको हावामा अनुवाद भयो । सिंहदरबार देशको त्यस्तो खतरनाक ७६ औं जिल्ला हो, त्यहाँ पुगेपछि अपवाद बाहेक सवै दाँत फुक्लेको बाघ भएर फर्किएका छन् । अरु त अरु मिथकको पात्रबाट नेपाली राजनीतिमा अवतरित प्रचण्डलाई समेत सिंहदरवारले बाघबाट मुसोमा झारेर छोडिदियो । सिंहदरबार पस्दा पृथ्वी नै सम्याउने अहं प्रदर्शन गर्ने फर्कंदा आफ्नो कामको बाटो नै पहिचान गर्न नसक्ने गोलचक्करबाट आजसम्म सयौं राजनीतिज्ञहरु पीडित बनेका छन् ।
केही दिनपछि राज्यमन्त्रीको सुविधासहित कर्मचारीबाट चुनिएर आएका अर्का स्थायी मन्त्री झण्डा हल्लाउँदै सिंहदरबार भित्रिदैछन् । भागवण्डा र सिण्डिकेटको जालोसहित आउने यो शक्तिले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वलाई सोभैm टक्कर दिनेछ । त्यसैपनि सचिव सरुवा, बढुवासम्म आफ्नो पहुँच स्थापित गरिसकेको यो शक्तिको वेगलाई टक्कर दिने क्षमता शायदै अहिलेको नेतृत्वमा छ । नेताहरुका लागि कर्मचारीको नेतृत्व भष्मासुरलाई महादेवले दिएको वरदान सावित हुनेछ । विपक्षमा हुँदा ट्रेड युनियनलाई गोमन साँप बनाउने र आपूm सत्तामा गएपछि त्यसले ठुँगेको रनाहाबाट विचलित भएर वरको सिन्को पर सार्न नसक्ने दलका नेताहरुको नियति अब त झन् स्थायी सपेरा हुनुको विकल्प छैन् । देखिन बाँकी पुलिस र सेनामा क्रान्तिकारी संघ खुल्नुबाहेक त्यहाँ भित्रका रमिता छताछुल्ल भएका छन् । सरुवा बढुवा हुन ब्रिफकेस हटकेक बनेका सन्दर्भ भलीभाँती बाहिर आएका छन् । देशका हरेक निर्णय दारी र सारीका प्रभावमा पर्ने क्रम तीब्र छ । चिनेकोलाई किनेको पक्काले विस्थापित गर्दै लगेको छ । जर्नेलहरुले लेखेको आत्मबृत्तान्त आत्मरतिमा अनुवाद हुँदा सिनियर गड र जुनियर डगको अवस्था राम्रैसंग उदाङ्गिएको छ । सामाजिक मनोविज्ञान हेर्दा लाग्छ– समयले बुढ्यौलीपनलाई विस्थापित गराइदिएको छ । रामनाम जप्नेहरु हराउँदै छन् । बरु रिटायर्डहरु नेभर टायर्ड भन्दै राज्यकै सुविधामा रमाउन कस्सिदैछन् । रिटायर्ड हुनुअघि नै पदको मेलोमेसो मिलाएर निस्कनेहरुको भीड पनि उत्तिक्कै हेर्नलायक देखिन्छ । आपूmबाहेक संसारलाई उल्लू देख्नेहरुको रोचक भीडन्त घरघर र टोलटोलका भट्टीमा देख्न पाइन्छ ।
राम्रो विचारले कालान्तरमा राम्रै कर्मको जन्म दिन्छ । त्यागको अभिमान धनको अभिमानभन्दा बढी खतरनाक हुन्छ । गौतम बुद्ध मूर्ति पूजाका विरोधी थिए । तर कालान्तरमा विश्वभर लाखौं उनैका मूर्ति बनाइए । प्रत्येक मानिस बुद्ध हो । मात्र फरक भगवान गौतम बुद्ध उठेका बुद्ध हुन भने हामी सुतेका बुद्ध । हरेक मानिस जागृत हुने हो भने बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छ । पुस्तकालयमा राखिएका गीता, कुरान र बाईबल आपैंंm युद्ध गर्दैनन्, जो युद्ध गर्छन तिनीहरुले त्यसको रस लिएकै हुँदैनन् । गाई जुनसुकै रंगको किन नहोस दूध त सेतै हुन्छ नि ।
भगवानको आराधना गरेर आपूmलाई भगवानमा लिन गरेकाहरु आपैंm भगवान भए तर उनीहरुले भगवानको साक्षात दर्शन भने पाएनन् । मानिस र जनावरमा के फरक छ ? जनावर त्यही खान्छ प्रकृतिले उसका लागि जे बनाइदिएको छ । तर मानिस त्यो पनि खान्छ , जुन प्रकृतिले उसका लागि नबनाएको होस् । कन्जुसलाई दान दिने मन पर्दैन । लोभीलाई माग्नेसंग घृणा हुन्छ । रुपवानलाई प्रौढता रुचि हुँदैन । गरिबलाई धनी मन पर्दैन । जसको मन शोकबाट ब्याकुल छ , उसलाई केही मन पर्दैन । ज्ञानीहरुले क्रोधलाई खुर्सानी, अहंकारलाई तेल, लोभलाई मिठाई, स्वार्थलाई घिउ, धोकालाई पापडसंग तुलना गरेका छन् । उच्च आसनमा बस्दैमा मानिस महान हुँदैन । उ महान त गुणबाट हुन्छ । महलको टुप्पोमा बस्दैमा काग गरुड कहिले पो हुनसकेको छ र ?
भेनेजुयलाको राष्ट्रपति ह्युगो चाभेज मर्दा कान्छाबाउ विते जसरी अनुहार विगार्ने नेताहरु चाभेजले जस्तो जनतालाई समृद्ध बनाउने काममा नौ नारी गलाएर बसेका छन् । आफ्ना जनतालाई ५० पैसा लिटर तेल उपलब्ध गराउने चाभेजको लोकप्रियता कति होला ? अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । जो मानिस एक्लो उभिन्छ, उही महान हो । चाभेजले बाचुन्जेल अमेरिकाजस्तो देशलाई च्यालेन्ज गरिरहे । अन्तिम अवस्थामा पनि छिमेकी देश ब्राजिलमा उपचार गरे तर युरोप, अमेरिका टेकेनन् । श्रीलंकाबाट प्रेरित लिक्वानले सिंगापुरे जनतालाई यस्तो हिरा बनाइदिए जुन देशका नागरिकले विश्वका कुनै मुलुक टेक्दा पनि कुनै तगारो लाग्दैन् । उनले विदेशीको रेडिमेड माछा कहिल्यै स्वीकारेनन् । बरु बल्छी मागेर जनतालाई माछा मार्न सिकाए । पाउरोटीको साटो पाउरोटी बनाउने सीपको अभियान छेडे । हाम्रा नेताहरु भने आफ्ना युवाहरुलाई मलेशिया पठाउन नेताहरु हौसिए । तर त्यहाँका मोहम्मद महाथिरले देश बनाउन गरेको योगदान चटक्कै बिर्सिए । लाटो छोराले बाउ घुक्र्याएजस्तो छिमेकीलाई मनपरी भन्ने अनि आङ्मा सुके लुतो निस्कियो भने उसैले पठाइदिएको एयर एम्बुलेन्स चढेर राष्ट्रियताको पाखण्डी गीतामा शायदै अरु देशका नेता रमाउँछन् । गुलियो बचन बोल्ने त बोल्ने भइगो, कलबिख तीतो बोल्ने पनि अन्ततः प्रायोजित विज्ञापनको कलाकार रहेको भेद खुल्ने गरेको छ । मान्छे हैन, रोबर्ट मान्छे बोल्ने गरेको छ ।
शिक्षाको शुरुवात कितावबाट होइन, कोक्रोबाट हुनुपर्छ । ज्ञानका हकदार शिक्षक नभएर गुरु हुन् । शिक्षकले सूचना दिन्छन् भने गुरुले ज्ञान । ज्ञानले बाँच्ने कला सिकाउँछ । तर सूचनाले फन्टुस गफ गर्न । यसैको परिणाम पपकर्न भनेपछि मरिहत्ते गर्ने तर हाँडीमा भुटेको मकैलाई घृणा गर्ने पुस्ता हावी बन्दै गइरहेको छ । कानमा लगाइएको सुनले आप्mनो विज्ञापन गर्दैन । त्यसको सौन्दर्यको मानिसले बाहिरबाटै हेरेर गर्न सक्छ ।
क, ख, एबीसीडी बनाउनेहरु पक्कै पनि निरक्षरी थिए । तर तिनै अपठितहरुले बनाएको बा¥हखरी पढेर आपूmलाई स्वघोषित मूर्धन्य ठान्नेहरुले न ए अगाडि केही पत्ता लगाउने सके, न ज्ञ पछाडि केही खोज्न सके । हाम्रो समाजमा एकथरि मान्छे छन, जसलाई गंगा आए गंगै ठीक, जमुना आए जमुनै ठीक । अर्काथरि मान्छे जो यति अतिवादी छन कि समाधानभित्र पनि समस्या खोजिदिन्छन । तेस्रोथरिको त रोगै विचित्रको छ , उनीहरु संसारका भएजति सवै दुख बटुल्छन अनि खोज्छन– सुख । राजनीतिका नाममा देशभरि जातीयताका बग्रेल्ती सलाईका का“टी छर्नेहरुले अब कसरी थान्को लगाउलान । ठट्टामा मिल्काइएका यी का“टी जम्मा भएर बारुदको डन ठान्नेहरुसंगै आएर झोसिए भने के हालत होला ? सद्दाम हुसेन र बिन लादेन पनि कुनैबेला अमेरिकाले सनकमा छरेका यस्तै का“टी थिए । कालान्तरमा तिनैको शक्तिले अमेरिकाको टवीन टावरमा धावा बोल्यो । नेपालको ठुटे पेरिस डा“डाको त के कुरा ?
शैक्षिक परामर्श केन्द्र दर्ताबिना सञ्चालन